Horumarka ganacsi ee laga dareemayo Hobyo | KEYDMEDIA ONLINE
Horumarka ganacsi ee laga dareemayo Hobyo
Magaalo xeebeedka qadiimiga ah ee Hobyo ayaa laga dareemayaa horumar ganacsi oo wax weyn ka baddalay nolosha dadkii ku noolaa halkaas, iyadoo ay arrintani qeyb ka qaateen ganacsato deegaanka ah oo is-xil-qaamay
HOBYO, Soomaaliya - Dadka ku nool magaalo xeebeedka Hobyo ee ka tirsan gobolka Mudug Soomaaliya ayaa ku naaloonaya una riyaaqay qiimo jabanaanta cuntada quurul-daruuriga ah ee noloshooda tan iyo markii ay keensadeen shirkad maxalli ah oo badeecado si toos ah uga keenta waddanka Isu-tagga Imaaraadka Carabta.
Badeecadaha lagu iibiyo dukaamada maxaliga ah ee Hobyo ayaa sida caadada ah waxaa laga soo rari jiray dukaamada ku teedsan wadada isku xirta Muqdisho iyo Bosaaso, oo in ka badan 500 kiilomitir u jirta, iyadoo qarashka lagu kordhiyay canshuuraha ay soo rogeen maamulada xuduudaha kala leh ee Puntland, Galmudug iyo Hirshabeelle, iyo sidoo kale kooxda Al-Shabab meelaha ay maamulaan.
Tan iyo bishii Janaayo, shirkadda maxalliga ah ee Baraarug ayaa cunno iyo shidaal ka soo dhoofineysay waddanka Isu-tagga Imaaraatka Carabta oo keeneysay dekedda yar ee Shactarka looga soo dajiyo badeecadaha ee Hobyo, iyadoo hareer mareysa habab badan oo canshuuro ah isla markaana ka dhigeysa qiimaha mid dadka dan-yarta ah ay awoodi karaan.
Nus kiilada bariiska ah wuxuu u dhexeeyaa $20 ilaa $30, balse hadda wuu ka jaban yahay, qof walba wuu awoodi karaa inuu iibsado!” sidaas waxaa yiri Cali Aadan Cabdille, oo ah shaqaale caadi ah oo ku nool magaalada Hobyo, kaasoo ay ku adkaatay inuu daboolo baahida qoyskiisa oo ka kooban shan qof.
“Maraakiibtu waxay yimaadaan laba ama saddex jeer bishii iyagoo sida bur, sonkor bariis iyo xitaa timirta.” Ayuu sii raaciyay Cali Aadan.
Cali Aadan bishii wuxuu ku bixin jiray reerkiisa $100 oo uu ku iibsan jiray nus jawaan midkiiba bariis, bur iyo sokor, balse biilka qoyskiisa ayaa hadda noqday $40. Wuxuuna u isticmaalayaa lacagta uga soo harta inuu ku bixiyo qarashka iskuulka laba caruurtiisa ah oo ku jira dugsiga hoose ee Hobyo.
Waxaa jira ku dhawaad 500 dhalinyaro u badan oo ka helay fursad shaqo cusub dekedda magaalo xeebeedka Hobyo, iyaga oo alaabta kala soo daga markasta oo markab yimaado, Cali ayaana ka mid ah, wuxuuna helaa lacag gaareysa $100 markiiba. Wuxuu sheegay in nolosha qoyskiisa ay si aad ah isu badashay.
Magaalada Hobyo waxay heli jirtay kaliya afar saacadood oo koronto ah maalintii qiimaheeda qaaliga ah awgeed. tani waxa ku ridday ganacsatada kalluunka niyad jab xoog leh kaddib markii ay waayeen koronto ay ku keydsadaan kalluunka maadaama aysan suurta gal ahayn in ay ku shaqeystaan qaboojiyayaasha.
Kadib soo dejintii shidaal ka jaban, shirkad koronto oo cusub ayaa furtay waxayna hada siineysaa koronto 24 saac dadka oo dhan magaalada Hobyo, waxaana sare ukacay ka ganacsigii Kalluunka ee qaboojiya la’aantu ku dhacday.
Gabar 14 sano jir ah oo muddo laba maalin ah la la'aa ayey reerkeedu sheegeen in meydkeeda laga helay meel waddo dhinaceeda ah iyadoo meyd ah!
Guddigii Rooble magacaabay oo la kulmay AMISOM
Warar 19 June 2021 18:45